Google Earth မှပုံလိုင်းများကိုအဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့်ပြသထားသည်
ဤဆောင်းပါးသည် Google Earth ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်မှပုံလိုင်းများကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုရှင်းပြထားသည်။ ဒီအတွက် AutoCAD အတွက် plugin ကိုသုံးပါမည်။ အဆင့် ၁။ ကျွန်ုပ်တို့ Google Earth ဒီဂျစ်တယ်မော်ဒယ်ကိုလိုချင်တဲ့theရိယာကိုပြပါ။ အဆင့် ၂။ ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံကိုတင်သွင်းပါ။ AutoCAD ကို အသုံးပြု၍ Plex.Earth Add-ins ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အစဦးတွင်,…
၃ သတင်းနှင့်အရေးပါသောအဖြစ်အပျက် ၂၁ ခု - GEO အခြေအနေတွင် - ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစတင်သည်
Bentley, Leica နှင့် PlexEarth တို့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ မှစတင်၍ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအသစ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် geoengineering ပညာရှင်များအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်လမ်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရပ် ၂၁ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုစုပြီးဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်ခေါင်းစဉ်များမှာ BIM၊ GIS, PDI, Geostatistics, ...
Bentley Systems က PlexEarth
Google Earth ကို7ဖမ်းန့်သတ်ချက် Rectifier ပုံရိပ်တွေ Ortho
Plex.Earth3၏ဗားရှင်းသစ်ကိုထုတ်တော့မည်ဆိုပါက၎င်းသည် ၀ က်ဘ်မြေပုံ ၀ န်ဆောင်မှုများတင်ဆောင်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသော်လည်းယခုအချိန်အထိ orthorectified Google Earth ပုံကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သည့်ကြီးမားသောအားသာချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ဒါမလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google ကရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားနေလို့ ...
UTM Google Maps ပေါ်မှာပြသစနစ်များကို Coordinate
၎င်းသည်၎င်းနှင့်မတူပါ၊ သို့သော် PlexScape Web Services မှကိုသြဒီနိတ်များကိုအသွင်ပြောင်း။ ဂူဂဲလ်မြေပုံများတွင်ပြသရန်ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်သည်ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီး၏သြဒိနိတ်စနစ်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်နိုင်ငံကို Coordinate Systems နှင့်ထို့နောက် panel မှရွေးချယ်သည်။
Google Maps ကို UTM သြဒီနိတ်အတွက်ကြည့်ရန်နှင့်မဆို အသုံးပြု. ! အခြား coordinate system ကို
ဂူဂဲလ်မြေပုံများတွင် UTM နှင့်ပထဝီဆိုင်ရာကိုသြဒီနိတ်များကိုယခုအချိန်အထိတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့် WGS84 ဖြစ်သော Google ကပံ့ပိုးသော datum ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့သော် - MAGNA-SIRGAS, WGS72 (သို့) PSAD69 ရှိကိုလံဘီယာကိုသြဒီနိတ်ဂူဂဲလ်မြေပုံတွင်တွေ့လိုလျှင်ဘာလုပ်မလဲ။ ETRF89၊ စပိန်၏သြဒီနိတ်၊ ၁၈၇၀၊ မက်ဒရစ်သို့မဟုတ် REGCAN ၉၅ ပင်ဖြစ်သည်။
Cartografia, တီထွင်မှု, ပထမဦးဆုံးအစှဲ
Google Earth ကနေ Plex.Earth ဒေါင်းလုပ်ပုံရိပ်တွေကတရားမဝင်လား?
ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာမှရုပ်ပုံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သောပရိုဂရမ်အချို့မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရ Georeferenced သို့မဟုတ်မဟုတ်သည်၊ အချို့မှာ StitchMaps နှင့် GoogleMaps Downloader ကဲ့သို့မရှိတော့ပါ။ အခြားတစ်နေ့တွင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က AutoCAD မှ Plex.Earth သည် Google ၏ပေါ်လစီများကိုချိုးဖောက်ခြင်းရှိ၊ Google အသုံးအနှုန်းများက http://earth.google.com/intl/es/license.html (c) la …
AutoDesk Google Earth ကို PlexEarth
ယနေ့ခေတ်တွင်ပင် PlexScape စာမျက်နှာ၏စပိန်ဘာသာကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာမူရင်းဂရိထုတ်ဝေမှုအပြင်အင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်ဘာသာတို့ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် Plex.Earth ၏ဘာသာစကား ၁၀ မျိုးကျော်တွင်စပိန်ဘာသာကိုဗားရှင်း ၂.၀ တွင်ထည့်သွင်းထားသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မှနိမိတ်လက္ခဏာများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
Google Earth / Maps ကို, တီထွင်မှု
အဆုံးဝီကီလိခ်မတိုင်မီ Egeomates ...22011
၂၀၁၁ ခုနှစ်အကုန်အထိသုံးရက်သာကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမည့်ဤသတင်းနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အားဆက်သွယ်ခွင့်ပြုထားသည်။ ၁။ Microsoft သည် Bentley Systems ကို ၀ ယ်သည်။ ကြားသိရသည့်အတိုင်း Microsoft သည် Bentley Infrastructure 2011 တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည့် Bentley Systems ၏အဓိကဝယ်ယူရန်နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။ ပမာဏ…
Google Earth ကို PlexEarth
AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps ကို, Microstation-Bentley, အကြှနျုပျ၏ egeomates
လ 50 ကျော်အကြားတစ် ဦး က post ကို
လပေါင်း ၅၀ ကျော်ရေးသားပြီးနောက်ဤသည်အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ချက်မှာရွေးချယ်မှုသည်စာမျက်နှာမြင်ကွင်းများကိုအခြေခံထားသော်လည်း radiography သည် ၁၃ င်းတို့သည် AutoCAD သို့မဟုတ်၎င်း၏ဒေါင်လိုက် application များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မူကွဲအသစ်များ၏သတင်းများအကြားအမြဲတမ်းတည်ရှိပြီးဖြစ်သောအခင်းအကျင်း၊ မြို့ပြနှင့်လက်တွေ့အသုံးချမှု ...
အသားပေး, မာတိကာ, အကြှနျုပျ၏ egeomates
ပုံကို Google Earth ကို AutoCAD မှ Generate
လွန်ခဲ့သောအချိန်က Plex.Earth Tools for AutoCAD အကြောင်းပြောခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်တင်သွင်းခြင်း၊ georferenced ပုံရိပ်များကိုတင်ခြင်း၊ တိကျသေချာစွာဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းခြင်းများအပြင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်စူးစမ်းလေ့လာရေးinရိယာ၌များသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ Google Earth ကနေလိုင်းပုံစံမျိုးကိုပြချင်တယ်။ ဒီတစ်ခါလည်း ...
AutoCAD-AutoDesk, အသားပေး, Google Earth / Maps ကို, topografia
ပုံရိပ်တွေများအတွက် Google Earth ကို၏ 2.5 ဗားရှင်းဆောင်တတ်၏ထားတဲ့ PlexEarth,
၂၀၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်တွင်ကြေငြာရန်မျှော်လင့်ထားသော PlexEarth ဗားရှင်းအသစ်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်စစ်ထုတ်လိုက်ပြီ။ ဤကိရိယာသည်သိသာသောလက်ခံမှုရရှိရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်မလုပ်နိုင်ရာကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံး CAD (AutoCAD) ...
AutoCAD 2012 အရပ်ဘက် 3D Google Earth ကို PlexEarth
AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps ကို, တီထွင်မှု
Microstation, version 8.9 (XM) မှ Google Earth နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုယူဆောင်လာသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည် AutoCAD Civil 3D နှင့်ဆင်တူသည့်သုံးဖက်မြင်မော်ဒယ်နှင့်၎င်း၏ပုံရိပ်၏တင်သွင်းမှုကိုရည်ညွှန်းလိုသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် activate လုပ်သည်။ Tools> geographic သို့မဟုတ် Microstation တွင် ...
DGN Google Earth ကို PlexEarth
Google Earth / Maps ကို, Microstation-Bentley, topografia
ရရှိနိုင် Beta ကို Tools များ 2.0 PlexEarth
လွန်ခဲ့သောတစ်ရက်က AutoCAD အတွက် PlexEarth Tools ၏ဗားရှင်း 2.0 သည် AutoDesk Developer Network (ADN) မှ Google Earth တွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှတွင်လက်တွေ့ကျဆုံးသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမည့်သတင်းအကြောင်းပြောနေသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောအရာများအတွက် Beta ဗားရှင်းကိုယနေ့ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
AutoDesk အရပ်ဘက် 3D dwg Google Earth ကို PlexEarth
AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps ကို, ဗီဒီယို